Daawo:- Goalkii quruxda badnaa ee ay ku badiyeen xulka qaranka Somalia “Madax qurux badan”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Goalkii quruxda badnaa ee ay ku badiyeen xulka qaranka Somalia “Madax qurux badan”.
Daawo:- Goalkii quruxda badnaa ee ay ku badiyeen xulka qaranka Somalia “Madax qurux badan”.
September 6, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 0
Ciyaar kamid ah is reebreebka tartanka koobka aduunka ee 2020 kadhacaya dalka qatar ayaa dalka Jabuuti oo ah guriga Somalia kudhexmartay xulalka Somalia iyo Zimbabwe.
Ciyaarta oo ahayd mid ay aad uxiiseynayeen bulshada Somaliyeed ayaa ku dhamaatay 1-0 oo ay guusha ku raacday qaranka dalkeena.
Gool qurux badan oo madax ah ayay daqiiqadihii udambeeyay ee Ciyaarta heshay somalia kaas oo badalay shucuurta dadka somaliyeed.
Halkaan kadaawo goosgooska ciyaarta iyo goalka guusha qarankeena.
DAAWO MUUQAAL NAXDIN :Ha Isku Daawan Hadii Aad 18 Sano Kayar Tahay Waa South Afrika Dilkii Ugu Naxdinta Badnaa